Cloud Cloud Optimizely: Sida Loo Isticmaalo Mashiinka Istatiijiyada Si A/B Imtixaanka U Xariifsan, Oo Degdeg Ah | Martech Zone
Haddii aad raadineyso inaad socodsiiso barnaamij tijaabo ah si aad uga caawiso imtixaankaaga ganacsi & wax u barto, fursadaha ayaad adeegsanaysaa Sida ugu Fiican Cloud Cloud - ama ugu yaraan waad fiirisay. Optimizely waa mid ka mid ah aaladaha ugu awoodda badan ciyaarta, laakiin sida aalad kasta oo kale, waxaa laga yaabaa inaad u adeegsato khalad haddii aadan fahmin sida ay u shaqeyso.
Maxaa ka dhigaya Optimizely aad u awood badan? Ubucda qaab-dhismeedkeeda ayaa ah mashiinka tirakoobka ugu xog-ogaalka iyo dareenka badan ee ku jira aalad dhinac saddexaad ah, taas oo kuu oggolaanaysa inaad xoogga saarto helitaanka tijaabooyinka muhiimka ah si toos ah-adiga oo aan u baahnayn inaad ka walwasho inaad si xun u fasirayso natiijooyinkaaga.
Sida waxbarashada indhoole dhaqameedka ee daawada, A / B imtixaanka si aan kala sooc lahayn u muujin doona si ka duwan daawaynta ee bartaada dadka isticmaala kala duwan si markaa loo barbardhigo waxtarka daaweyn kasta.
Tirakoobku wuxuu markaa naga caawinayaa in aan samayno fikrado ku saabsan sida ay waxtar u yeelan karto daaweyntaasi muddada dheer.
Inta badan aaladaha imtixaanka A/B waxay ku tiirsan yihiin mid ka mid ah laba nooc oo tixraaca tirakoobka: Soo noqnoqoshada ama stats Bayesian. Dugsi kastaa wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo qasaarooyin kala duwan - Tirakoobyada soo noqnoqda waxay u baahan yihiin cabbir muunad ah in la hagaajiyo kahor tijaabinta, iyo tirakoobka Bayesian wuxuu inta badan daneeyaa sameynta go'aammo jihaysan oo wanaagsan halkii lagu tilmaami lahaa tiro kasta oo saamayn leh, si loo magacaabo laba tusaale. Awooda ugu sareysa ee Optimizely waa in ay tahay aaladda kaliya ee maanta suuqa taal si ay u qaadato ugufiican labada adduun qaabka.
Natiijada ugu dambaysa? Optimizely wuxuu awood u siiyaa adeegsadayaasha inay si dhaqso leh u tijaabiyaan tijaabooyinka, si la isku halleyn karo, iyo dareen ahaan.
Si aad taas uga faa'iidaysato, in kastoo, waxaa muhiim ah in la fahmo waxa ka dhacaya daaha gadaashiisa. Waa kuwan 5 aragtiyo iyo xeelado kaa heli doona adiga oo adeegsanaya awooda Optimizely sida pro.
Istaraatiijiyada #1: Fahmaan in Dhammaan Cabbirayaasha aan loo abuurin si isku mid ah
Inta badan aaladaha imtixaanka, arrin inta badan la iska indho tiray ayaa ah in inta cabbir ee aad ku darto oo aad raacdo qayb ka mid ah imtixaankaaga, ay u badan tahay in aad aragto gunaanadyo aan sax ahayn sababtuna tahay fursad aan kala sooc lahayn (tirakoobyada, tan waxaa lagu magacaabaa “dhibaatada imtixaanka badan ”). Si loo sugo natiijooyinkeeda la isku halleyn karo, Optimizely waxay isticmaashaa kontaroolo taxane ah iyo sixitaanno si ay u ilaaliso fursadaha arrintaas sida ugu hooseysa ee suurtogalka ah.
Xakamaynta iyo toosintaasi waxay leeyihiin laba saamayn marka aad u socoto si aad u samayso tijaabooyin si Hufan. Marka hore, mitirka aad u qoondeysay inuu yahay kanaga Mitirka Koowaad si dhakhso leh u gaadhi doona muhiimadda tirakoobka, dhammaan waxyaabaha kale oo joogto ah. Midda labaad, inta cabbir ee aad ku darto tijaabada, ayay sii dheeraan doontaa cabbiraadahaaga dambe si loo gaaro muhiimadda tirakoobka.
Markaad qorsheynayso tijaabo, hubi inaad taqaanid qiyaasta noqon doonta Waqooyigaaga runta ah ee habka go'aan-qaadashada, samee taas Metric-kaaga Koowaad. Markaa, ku hay inta kale ee liisaska cabbiraadahaaga adoo ka saaraya wax kasta oo aad u sarreeya ama aan la taaban karin.
Istaraatiijiyada #2: Dhiso Sifooyinkaaga Caadiga ah
Optimizely waxay ku fiican tahay inay ku siiso dhowr siyaabood oo xiiso leh oo waxtar leh si aad u kala saarto natiijooyinka tijaabadaada. Tusaale ahaan, waxaad baari kartaa in daawaynta qaarkood ay si ka fiican uga shaqeeyaan desktop -ka iyo moobiilka, ama u fiirsadaan kala duwanaanshaha ilaha taraafikada. Marka barnaamijkaaga tijaabintu qaangaadho, si dhakhso ah ayaad u jeclaan doontaa qaybo cusub-kuwani waxay gaar u noqon karaan kiiskaaga isticmaalka, sida qaybaha hal mar iyo iibsiyada rukunka, ama guud ahaan sida “soo-booqdayaasha soo laabanaya” (taas oo, si daacadnimo ah, weli ma garan karno sababta taas aan sanduuqa looga bixin).
Istaraatiijiyada #3: Sahami Optimizely's Stats Accelerator
Mid ka mid ah astaamaha aaladaha tijaabada ee aadka loo-buuxiyo waa kartida adeegsiga “burcad hubaysan oo badan”, nooc ka mid ah barashada mashiinka algorithm oo si is-beddel leh u beddelaya halka taraafikadaada loo qoondeeyay muddada tijaabada, si loogu diro booqdayaal badan “guuleysta” kala duwanaansho sida ugu macquulsan. Arrinta burcadda hubaysan ee badan ayaa ah in natiijooyinkoodu aysan ahayn tilmaamayaal lagu kalsoonaan karo oo waxqabad muddo dheer ah, sidaa darteed kiiska adeegsiga ee tijaabooyinka noocan ahi wuxuu ku kooban yahay kiisaska waqtiga xasaasiga ah sida dallacsiinta iibka.
Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay nooc kale oo algorithm burcad ah oo ay heli karaan isticmaaleyaasha qorshayaasha sare - Stats Accelerator (oo hadda loo yaqaan "Dardargelinta Barashada" ikhtiyaarka gudaha Burcadda). Qaab-dhismeedkan, halkii la isku dayi lahaa in si firfircoon loogu qoondeeyo taraafikada kala-duwanaanshaha ugu wax-qabadka badan, Si habsami leh ayaa si firfircoon ugu qoondeeya taraafikada kala-duwanaanta u badan inay gaaraan muhiimadda tirakoobka ugu dhaqsaha badan. Habkan, si dhakhso ah ayaad wax u baran kartaa, waxaadna sii haysan kartaa ku -celcelinta natiijooyinka imtixaanka A/B.
Istaraatiijiyadda #4: Ku dar Emojis Magacyadaada Metric
Jaleecada hore, fikradani waxay u badan tahay inay meesha ka baxdo, xitaa inane. Si kastaba ha ahaatee, dhinac muhiim u ah hubinta inaad akhrinayso natiijooyinka tijaabada saxda ah waxay ka bilaabataa hubinta in dhagaystayaashaadu fahmi karaan su'aasha.
Mararka qaarkood in kasta oo aan dadaalkeennii ugu fiicnaa, magacyada cabbirku waxay noqon karaan kuwo jahawareer leh (sug - miyuu dabkaasi cabbayaa marka amarka la aqbalo, ama marka adeegsaduhu ku dhufto bogga mahadsanid?), Ama tijaabintu waxay leedahay qiyaaso aad u tiro badan oo kor u riixaya oo hoos u dhigaya natiijooyinka boggu wuxuu horseedaa culeyska garashada guud.
Ku darista emojis magacyada cabbirradaada (bartilmaameedyada, calaamadaynta cagaaran, xitaa boorsada lacagta weyni way shaqayn kartaa) waxay ku dambayn kartaa bogag aad looga fiirsado.
Na aamin - akhrinta natiijooyinka waxay dareemi doontaa wax aad u sahlan.
Istaraatiijiyada #5: Dib u tixgeli Heerkaaga Muhiimadda Tirakoobka
Natiijooyinka waxaa loo malaynayaa inay yihiin kuwo dhammaystiran marka la eego macnaha guud ee tijaabada ugu habboon marka ay gaadhaan muhiimadda tirakoobka. Muhiimada tirakoobku waa erey xisaabeed oo adag, laakiin asal ahaan waa suurtogalnimada in indho -indhayntu ay ka dhalatay farqiga dhabta ah ee u dhexeeya laba dad, oo aan ahayn fursad aan kala sooc lahayn.
Heerarka ahmiyadda tirakoobka ee Optimizely ee la soo sheegay ayaa “had iyo jeer ansax ah” waxaa mahad leh fikradda xisaabeed ee la yiraahdo imtixaanka isku xigxiga - tani dhab ahaantii waxay ka dhigaysaa kuwo aad loogu kalsoonaan karo marka loo eego kuwa aaladaha kale ee imtixaanka, kuwaas oo u nugul dhammaan noocyada “fiirinta” arrimaha haddii aad dhakhso u akhrido.
Waxaa mudan in la tixgeliyo heerka muhiimada tirakoobka ee aad u aragto inuu muhiim u yahay barnaamijka imtixaankaaga. In kasta oo 95% ay tahay heshiiska bulshada sayniska, waxaan tijaabineynaa isbeddelada mareegaha, ma aha tallaallo. Doorasho kale oo caadi ah oo adduunka tijaabada ah: 90%. Laakiin miyaad diyaar u tahay inaad aqbasho waxoogaa hubanti la'aan ah si aad tijaabooyinka dhaqso ugu waddo oo aad u tijaabiso fikrado badan? Miyaad adeegsan kartaa 85% ama xitaa 80% muhiimadda tirakoobka? Inaad si ulakac ah u ahaato dheelitirkaaga abaal-marinta halista ah waxay bixin kartaa faaiidooyin xad-dhaaf ah waqti ka dib, markaa si taxaddar leh uga fikir.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Cloud Cloud si fiican
Shantaan mabaadiida deg -degga ah iyo aragtiyaha ayaa si aad ah waxtar u leh in maskaxda lagu hayo marka la isticmaalayo Optimizely. Sida aalad kasta, waxay hoos ugu dhaadhacaysaa hubinta inaad leedahay faham wanaagsan oo ku saabsan dhammaan habaynta muuqaalka dambe, si aad u hubiso inaad u adeegsanayso aaladda si hufan oo waxtar leh. Fahamkaan, waxaad ku heli kartaa natiijooyin la isku halleyn karo oo aad raadineyso, markaad u baahato.
Tags: sifooyinkasifooyinka gaarka ahemojitijaabintajaangooyooyinkaugu habboonDaruuraha sirdoon ee ugu habboonmitirka koowaadcabbirrada asaasiga ahimtixaanka isku xigxigamuhiimadda tirakoobkaxawaaraha statsimtixaankasifooyinka imtixaankacabbiraadda imtixaankatijaabinta webka